Igbo, Romans, Lesson 003 -- Identification and apostolic benediction (Romans 1:1-7) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 003 (Identification and apostolic benediction)
NDI ROM 1:2-4
2 nke O kwere nkwa na mbu site na ndi-amuma Ya n’Akwukwo Nsọ, 3 banyere Ọkpara Ya Jizos Kraist Onye-nwe-ayi, onye amuru site n’ nkpuru Devid dika anu aru si di, 4 onye ekwuputara na ya bu Ọkpara Chineke n’ike dika Mmuo nke ịdị-nsọ, site na nbilite-n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.
Dika Nail nesi nesi kwa nkpirisi igha nile nke ala na eme ka ha mu nkpuru, ya mere ozioma na aru oru na ndi kwere ekwe naenye ha ike ma na eme ka ha mu nkpuru ma nwe onu. Nnukwu ihe omimi nke ozi-ọma bụ ọbịbịa na ọrụ nke Jizọs Kraịst. A na-akpọ gị ka ị ghara ikwere n'akwụkwọ, kama na akụkọ mere eme, oge na-adịghị agafe agafe. Ọtụtụ puku afọ gara aga Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya na a ga-amụ nwoke site na mmụọ nke Chineke na nke nwanyị na-amaghị nwoke dị ọcha, aha ya ga-abụ naanị Ọkpara Chineke. Amụma Tore jupụtara na amụma a. Ya mere, ezi onye amụma ọ bụla na-ekwupụta, n'ozi ya, na Kraịst bụ Ọkpara Chineke. ,Nye ga-emegide Chineke dị nsọ, ma ọ bụrụ na o kwupụta onwe ya, na ịdị n'otu ya, ka ọ bụrụ Atọ n'Ime Otu, iji gbanwee echiche anyị na-adịghị mma ma bulie anyị nghọta ọhụrụ miri emi? Kemgbe Kraist biara, Anyị amatawo na Chineke bụ Nna dị obi ebere ma na-ahụ n’anya, n’ihi na onyinyo nke Ọkpara obi ebere ahụ mere ka anyị mata echiche ma ọ bụ mmụta ọhụrụ banyere Chineke; na Ọ bụ hụnanya.
Ọkpara nke Chineke wee bụrụ ezi nwoke, nke amụrụ site na mkpụrụ nke Eze Devid, onye amụma na onye ọbụ abụ, onye natara nkwa sitere n’aka Chineke na otu n’ime ụmụ ya ga-abụ Nwa nke Onye Kachasị Elu (2 Sam 7:14). N’ime anu a, Kraist ebighebi yikwasi ike nke anu aru ya ma nwaa ya n’uzo obula, dika anyi di.
O meghi mmehie, onwu enweghi ike n’isi ya, n’ihi na Mo Nso nke biri n’ime ya n’ogo ya dum, meriri aru nke nmehie. Jizọs gosipụtara ike ya n'ụzọ ọrụ na enweghị mgbagha mgbe o bilitere n'ili, na-enwe mmeri na ijide ike nke ọnwụ, onye iro nke mmadụ. Site na ihe omume a dị ebube Chineke gosipụtara ịbụ nwa Jizọs, ma mee ka o nọdụ n’aka nri ya dịka ezi Onyenwe anyị, ebe ọ na-achị ugbu a dị ka Jizọs kwuru: “Enyewo m ikike nile n’eluigwe na n’elu ụwa”, wee dịrị ndụ. nọnyere Nna anyị na Mmụọ Nsọ; otu Chineke rue mgbe ebighi ebi.”
Ike nke Kraist Kraist siri na Pol da na ngbaru n’ime uka nile; ike nke Jizọs na-arụkwa ọrụ ọbụna taa n’etiti ndị na-ekwupụta na Onye amụrụ nwanyị na-amaghị nwoke bụ Onyenwe anyị dị ndụ n’onwe ya. Nkwupụta a: "Jizọs Kraịst Onyenwe anyị" bụ nchịkọta nke okwukwe anyị kemgbe mmalite nke Iso ekeresimesi Kraịst. O nwere otutu ihe omimi nke Atọ n’Ime Otu, ike nke nzoputa na olile anya.
EKPERE: Nwa nke Chukwu, anyi na-efe gi ofufe, nihi na i buru onye mmadu n’isi, i kariri mmehie na onwu n’ahu gi. Biko nabata ndụ anwụ anyị n’ekele gị, jirikwa mmụọ nsọ gị sachaa anyị ka anyị wee ruo eru maka alaeze nke ịhụnanya gị. Anyị na-arịọ gị ka ị merie echiche, okwu, na omume anyị ka anyị wee bụrụ ndị akaebe kwesịrị ntụkwasị obi nye gị site n'aka ndị ọrụ niile nke ikwesị ntụkwasị obi gị na mba anyị.
Gini bu okwu a na Kraist bu Okpara Chineke?
Page last modified on January 25, 2021, at 04:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)